Etu esi egwu ndu Blackjack Blackjack - cheapinternetsecuritysoftware.com
Blackjack bụ otu n’ime ihe kachasị cha cha egwuregwu egwuregwu ịghọta, mana ọ nwere ike iwe gị obere oge iji mụta. Site n’enyemaka nke ndu a zuru oke banyere otu esi egwu blackjack, anyị nwere ike ịkwado gị na nka na ihe ọmụma iji nwee anụrị ọbụlagodi mgbe ịnọdụ ala na-egwu megide ezigbo onye na-ere ahịa na LiveRoulette Live cha cha.
Na ihe karịrị 20 ndụ blackjack tebụl ịhọrọ site na LiveRoulette, enwere ohere mgbe niile igwu egwu nke blackjack ma ọ bụ jiri ụfọdụ n’ime ụdị nzọ dị n’akụkụ nke nwere ike ịgbanwe egwuregwu gị. Tupu ịmalite, ọ ga-adị mma ka ị mata ihe ndị bụ isi nke blackjack ma were usoro kachasị mma iji belata ọnụ ụlọ.
Nhazi ihuenyo nke okpokoro blackjack dị ndụ
Site na mgbe ị na-ebubata tebụl cha cha blackjack dị ndụ, ị ga-ezute enyi na enyi, ọkachamara n’ịzụ ahịa iji jikwaa egwuregwu gị. Nwere ike ịhụ oche asaa egwuregwu gburugburu tebụl. Oghere oche ga-asị ‘Nọdụ ala ebe a’ naanị ị ga-pịa iji sonyere ihe ahụ.
Ngosipụta nke itule akaụntụ gị dị na akuku aka ekpe nke ihuenyo ahụ ma ị nwere ike ịhọrọ oke nke osisi gị na bọtịnụ ‘Total Bet’ n’akụkụ ya. Pịa n’ime gburugburu nke oche gị ọnọdụ ozugbo nzọ otu unit. I nwekwara ike pịa mpaghara ebe ị ga-etinye ebe ndị ọzọ ma ọ bụrụ na-ịchọrọ.
Ọ ga-ekwe omume isoro onye na-ere ahia na ndị egwuregwu ndị ọzọ na-akparịta ụka na tebụl na oge na-eji bọtịnụ ‘Lobby’ n’akụkụ aka nri nke ihuenyo ahụ.
Kaadị ụkpụrụ na ndụ blackjack
Ofkpụrụ kaadị na egwuregwu nke blackjack dị mfe ịgbaso. Ha kwekọrọ na ọnụọgụ ọnụọgụ ha gosipụtara na kaadị. Kaadị ihu (Jack, Queen na King) bara uru iri, ebe Ace nwere ike ịba uru otu ma ọ bụ 11 wee kpọọ agbanyeghị ịchọrọ.
Omume egwuregwu na-adị na blackjack dị ndụ
Site na ‘ịkụ aka’, ị na-arịọ kaadị ọzọ n’aka ndị na-ere ahịa ka ị nwaa ka mma (aka) gị. Can nwere ike ịga n’ihu kụrụ kaadị ruo mgbe uru aka gị dị 21 ma ọ bụ karịa.
Nwere ike ịhọrọ iguzo n’aka gị, nke pụtara na ị na-enwe obi ụtọ na uru nke kaadị gị adịghị achọ ihe ọ bụla site na oche ahụ. Nwere ike ịhọrọ iguzo aka gị iji zere gafere 21 na ịga bust.
Mgbe onye na-ere ahia nyere gị kaadị abụọ nke otu ọnụ ahịa, ị nwere ike kewaa ha. Gbawa na-eme ka kaadị ndị a gaa aka abụọ dị iche iche, ndị na-ere ahịa na-enyekwa gị otu kaadị ọzọ maka aka ọ bụla. Ga-akwụ ụgwọ iji kewaa. Nzọ ọzọ ga-aharịrị na mbido gị.
Ọ bụrụ na ị kwenyere na otu kaadị ọzọ ga-emezi aka gị iji merie onye na-ere ya, ịnwere ike ịhọrọ okpukpu abụọ. Ga-enweta naanị otu kaadị site na oche ahụ ma ị ga-agharịrị okpukpu abụọ ịmalite gị.
Mgbe ọ bụla onye na-ere ahịa azụmaahịa bụ Ace, onye na-ere ahịa ahụ ga-enye gị mkpuchi nzọ n’akụkụ nke nwere ike ikpuchi mfu gị ma ọ bụrụ na onye ahịa ahụ nwere blackjack.
Aka ole ka ị nwere ike igwu na ndụ blackjack?
Nwere ike igwu egwu dị ka ọtụtụ aka ịchọrọ na ọtụtụ tebụl blackjack dị ndụ. Ebe ọ bụla enwere oche ohere na tebụl, ịnwere ike iji ya na-egwu ọtụtụ aka na oche dị iche iche – na-enye gị ego maka ya. N’adịghị ka egwuregwu kaadị ndị ọzọ dịka Texas Hold’em Poker, ebe ọ gaghị ekwe omume iweghara ọtụtụ oche na tebụl, ị nwere ike ịme ya na blackjack n’ihi na ị naghị egwu egwuregwu ndị ọzọ na tebụl, naanị ndị na-ere ahịa.
Gịnị ka nzọ n’azụ pụtara?
Mgbe ụfọdụ tebụl blackjack dị ndụ, ị nwere ike ịnwe nhọrọ iji ‘nzọ n’azụ’ onye ọkpụkpọ na-arụ ọrụ na tebụl. Nke a pụtara na ị ga – akụ nzọ n’aka onye ị họpụtara ga – akụ aka onye aka gị. Ọ bụ ezie na ị gaghị ekwu okwu ma ọ bụ chịkwaa etu aka si apụta, o doro anya na ị ga-ahọrọ onye ọkpụkpọ ị họọrọ ịkụ nzọ n’azụ.
Onye ọ bụla na-arụ ọrụ na tebụl ga-enwe akara ngosi gosipụtara n’akụkụ aha ha, na-egosipụta otu ha si egwu. Ndị nọ na ‘ọkụ’ ma ọ bụ mmeri ga-enwekarị ọla edo ma ọ bụ kpakpando n’akụkụ aha ha.
Kedu ka onye na-ere ahia si akpọ aka ha?
I kwesịrị ịma ugbu a ka esi egwu aka gị blackjack na tebụl, mana ị maara ka onye na-ere ahia si akpọ aka ha? N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ọ bụrụ na kaadị abụọ nke ndị na-ere ahịa gbakwunye na 16 ma ọ bụ obere, ha ga-akụ ma were kaadị ọzọ. Ọ bụrụ na kaadị abụọ ha dị n’etiti dị n’agbata 18 na 21, ha ga-akwụrịrị ma weghara kaadị ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na onye mgbere nwere ‘ike’ 17, ha ga-eguzo. Ihe siri ike 17 bụ aka na-enweghị nnabata ma ọ bụ nwee otu ma ọ bụ karịa aces na uru dị na otu. Ọ bụrụ na onye na-ere ahia nwere ‘adụ’ 17, ha ga-akụ ma were kaadị ọzọ. 17 dị nro bụ aka nke nwere ace na uru ịnọ na 11.
Aka onye na-ere ahia ga-emeri gburugburu ma ọ bụrụ na aka gị akụ, maọbụ ọ bụrụ na nhọrọ dị iji nyefere aka gị na ọkara nke mbụ osisi gị. Aka ha na-enwetakwa ma ọ bụrụ na ọ dị nso na 21 karịa nke gị. Ọ bụrụ na gị na onye na-ere ahia nwere aka nke otu uru ahụ, nke a bụ ‘ịkwanye’. Na ihe omume a, ị na-anara osisi mbụ gị zuru oke n’ihi egwuregwu jikọtara.
Okwesiri ighota na onye ahia ahia adighi obere ikwu otu ha si egwu aka ha. Ha ga-agbaso iwu ụlọ nke iguzosi ike na 17 na ịkụ na nro 17. N’ọnọdụ ọ bụla, ha nwere ike ịgbanwe tac ma kpọọ aka ha n’ụzọ dị iche.
E nwere ugwo na tebụl blackjack
Nke mbụ, ọ bụrụ na ị merie aka nke blackjack dị ndụ megide aka onye na-ere ahịa, ị ga-emeri ụgwọ ị ga-akwụ 1: 1. Ọ bụrụ n ’itinye € 10, ị ga-enweta in 10 na mmeri, gbakwunye your 10 gị.
Obere obere ihe doro anya maka blackjacks. Tablesfọdụ nkwụnye ego tebụl 6: 5 maka blackjack, ebe ndị ọzọ ga-akwụ 3: 2. Iji maa atụ, ọ bụrụ n’itinye bet 10 ma nweta blackjack na tebụl blackjack 6: 5, ị ga-enweta € 12 na mmeri, gbakwunyere ego € 10 gị. Ọ bụrụ n ’bet nzọ € 10 wee nweta blackjack na tebụl blackjack atọ atọ: 2, you’ll ga-enweta € 15 na mmeri, gbakwunyere ego stake 10 gị.
Ọ bụrụ nhọrọ ịpụ nzọ nzọ mkpuchi, nke a na – akwụ ụgwọ na 2: 1 ma ọ bụrụ na ndị na – ere ahịa ewepụta kaadị blackjack abụọ.
Ebe nzọ dị ndụ na blackjack
Ọ bụ ezie na a na-atụle nzọ n’azụ dị ka nhọrọ nzọ n’akụkụ, enwere ụzọ nzọ abụọ dị mkpa ị nwere ike idowe mgbe ị nọdụrụ ọdụ na tebụl blackjack dị ndụ anyị:
Ka anyị malite site na nzọ 21 + 3. Nke a na – eme n’etiti kaadị abụọ mbụ ị natara, yanakwa yana ‘upcard’ a na-ahụ anya nke ndị na-ere ahịa. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịmepụta otu kaadị poker na-eji kaadi abụọ mbụ gị na kaadi kaadị nke onye na-ere ahịa (iwepụ, kwụ ọtọ, kwụ ọtọ ma ọ bụ atọ nke ụdị) ị ga-enweta ụgwọ. Ọnụ ego ịkwụ ụgwọ na-adabere n’ụdị ụdị poker ị nwere ike ịmepụta. Ọ na – esite na 5: 1 maka iwepụ ruo 100: 1 maka kaadị atọ nke otu ụdị uwe ahụ.
Zuru okè ụzọ abụọ
Di na Nwunye zuru oke bụ nzọ nke abụọ kachasị ewu ewu ị ga-ahụ na tebụl blackjack anyị dị ndụ. Nhọrọ a na-ahọrọ n’akụkụ gị chọrọ ka ịchọta ụkpụrụ omume kaadị kwekọrọ, agba kaadị ma ọ bụ, nke ka mma, kaadị abụọ yiri. Nwere ike imeri 5: 1 maka ngwakọta agwakọta, dị ka ụzọ asatọ nke uwe dị iche iche. Nwere ike imeri 12: 1 maka agba agba, dịka ụzọ isii nke otu agba ahụ diamonds ma ọ bụ obi. N’ikpeazụ, ị nwekwara ike ịkwụ ụgwọ 25: 1 maka ịkwụ ụgwọ zuru oke, nke bụ kaadị abụọ yiri.
Ingghọta ezigbo atụmatụ na ndụ blackjack
Isi ihe na-enye onwe gị ohere kachasị mma nke mmeri na tebụl cha cha blackjack dị ndụ bụ ịnwe usoro aghụghọ. Atụmatụ aghụghọ bụ nke na-ebelata ọnụ ụlọ egwuregwu ahụ. N’iburu nke ahụ n’uche, ka anyị lelee ụfọdụ usoro ịkụ nzọ ị kwesịrị iji dị ka akụkụ nke atụmatụ kachasị mma nke blackjack:
Ugboro abụọ na 10 na 11
Casinosfọdụ ụlọ ịgba chaa chaa ga-eme ka ndị egwuregwu gbaa okpukpu abụọ na aka ha mgbe ejiri kaadị abụọ ha dị ọnụ ahịa ruru 10 ma ọ bụ 11. Inwe okpukpu abụọ na 10 ma ọ bụ 11 bụ egwuregwu dị egwu, ọkachasị ma ọ bụrụ na aka onye dị ala karịa. O nwedịrị ike ịbụ ihe amamihe dị na ya ịbawanye ala mgbe aka gị ruru itoolu na aka onye na-ere ahịa ka nwere obere uru.
Na-agbawa Aces na 8s
Ọ bụrụ na ị nwere ụzọ aces n’aka gị, nke a bụ nhịahụ ma ọ bụ nro ngụkọta nke 12. Nke a adịkarịghị ezigbo ọnọdụ ịnọ. Enwere nnukwu ohere nke ịdata kaadị ihu ma ọ bụ iri na kaadị gị na-esote. . Kesa ha na-enye gị ohere ịbute ụzọ abụọ blackjack ma ọ bụ kaadị abụọ dị elu karịa 12.
Otu ụzọ asatọ bụ ngụkọta siri ike nke 16, nke pụtara na enwere ọtụtụ kaadị na oche nwere ike ịkụ aka gị mgbe ị kụrụ. Mekọrịta asatọ gị n’aka abụọ na-enye gị ohere ịdọrọ iri na aka abụọ iji nweta 18, nke bụ nsonaazụ kwesịrị mma na nke a.
Zere ịnara Insurance
Mgbe obula onye ahia ahia bu ihe nzuzu, igha enweta ohere izuta ‘Insurance’. Nke a chọrọ ka ịkwụ ọkara nke oke nke osisi mbụ gị dị ka nzọ n’akụkụ, nke na-akwụ 2: 1 ma ọ bụrụ na onye na-ere ahịa nwere blackjack, na-achọpụta na ị ga-agbaji maka aka. Onye na-ere ahia agaghị enwe blackjack karịa oge 50%, yabụ Insurance bụ egwuregwu adịghị mma – ọ gwụla ma ị ga-ejide n’aka na kaadị ha ọzọ ga-abụ iri.
Nyefee 16 megide iri (ọ bụrụ na enyere)
Ọ bụrụ n ’mbido ma ọ bụ mbubreyo‘ nyefere ’, oge kachasị mma iji ya bụ oge ị nwere akara aka nke 16 megide iri ndị na-ere ahịa. Enwere ọtụtụ kaadị na oche nwere ike ịkụ aka gị na ego yiri ya nke nwere ike inye aka onye na-ere ahịa ohere a na-enweghị ike ịkọwa. Ọ bụ ya mere o ji bụrụ ihe ezi uche dị na ya ị belata ọnwụ gị wee nyefee ọkara osisi gị n’ọnọdụ a.
Ndụ iche blackjack
Ọ bụghị afọ ojuju na egwuregwu egwuregwu egwuregwu nkịtị? Anyị kpuchie gị. Na LiveRoulette, ị nwere ike itinye onwe gị na mgbanwe atọ dị iche iche nke blackjack. Ha niile na-enye egwuregwu na-atọ ụtọ, na-agba ọsọ ọsọ, dị na desktọọpụ na ngwaọrụ mkpanaka niile.
Blackjack ọsọ ọsọ
You dị mkpụmkpụ oge? Ọ bụrụ na ịnweghị oge ịla n’iyi, Speed ​​Blackjack nwere ike ịbụ ezigbo ihe ngwọta maka gị. Kwadoro site na LiveRoulette ibe Evolution Gaming, Speed ​​Blackjack na-eme ka egwuregwu dịkwuo elu ebe ọ bụla enwere ike. Akpa kaadị abụọ na-egwu dị ka ihe nkịtị, mana nzọụkwụ ọzọ dị iche.
Na Speed ​​Blackjack, ndị egwuregwu kachasị ọsọ iji mee mkpebi ha iguzo, kụrụ, kewaa ma ọ bụ okpukpu abụọ ga-ebu ụzọ soro onye na-ere ahia. Ọ na – ebelata oge ichere ndị egwuregwu nwere ahụmahụ maara ihe ha na – eme, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ naghị enye gị mgbakọ na mwepụ.
Enweghi ngwụcha Blackjack
Ọ bụrụ na ị bụ onye nwere ike iwepụta oge iji kpọọ ndụ blackjack n’oge awa ‘kachasị’, ohere ọ ga-abụ bụ na ọtụtụ tebụl blackjack ga-ejupụta na ndị egwuregwu mgbe ị banyere. Enweghị mkpa ịchegbu onwe gị maka enweghị ike igwu egwu n’agbanyeghị, ekele anyị Infinite Blackjack tebụl.
Dị ka aha ahụ na-egosi, tebụl nkwụsị ndị a dị ala na-enye ọnụ ọgụgụ na-akparaghị ókè nke ndị egwuregwu, na-enweghị mkpa ichere maka oche ịnọ. Nke ahụ bụ n’ihi na ndị ọrụ niile na-arụsi ọrụ ike na-anata ‘kaadị’ aka abụọ. N’ikpeazụ, onye ọkpụkpọ ọ bụla nwere ike igwu aka nke fọdụrụ na aka ọ bụla ha chọrọ. Ọ dịghị ihe na-erughị anọ n’akụkụ nzọ ịhọrọ site kwa.
Blitz Blackjack, nke LiveRoulette na-akwado NetEnt, na-arụ ọrụ n’otu ụkpụrụ dị ka Infinite Blackjack. Ndị egwuregwu niile na-anata otu kaadị abụọ ahụ na ihuenyo site n’aka onye na-ere ahịa wee nye ha nhọrọ ịkụ, guzo ma kewaa kaadị abụọ ahụ iji mee ka aka nke aka ha bụrụ nke ha. Ọzọkwa, enweghị oke ọnụọgụ nke ndị egwuregwu nwere ike igwu egwu na tebụl ndị a, nke dị mma maka egwuregwu egwuregwu kacha elu.
Blackjack abụghị egwuregwu cha cha dị mgbagwoju anya ma ọ bụ egwu. Can nwere ike ịghọta ya n’ime nkeji wee bido nwee anụrị na tebụl!
18+ | Gba chaa chaa nwere ike ịbụ ihe na-eri ahụ, biko kpọọ akpọrọ | Okwu & Ọnọdụ dị
Tags:Blackjack egwu esi Etu ndu